Warshadda Calanka Custom | Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Calanka Shiinaha
Kala Bixi Shaxda oo leh O ...
Dharka Calanka Calaamadaha - Lacagta
10 × 10 Xayeysiis Midab Buuran La daabacay ...
Calanka Xayeysiinta leh
Calanka Mashiinka Duubista Duplex
Calankan cinwaanka ah ee daabacaada labada qaybood ayaa si qayb ahaan ah loogu daabici karaa labada dhinac ee maro hal lakab ah. Iyo dharka tayada leh iyo khad daabacaadda ayaa gacan ka geysta bixinta midab aad u firfircoon. Saamaynta daabacaada muraayada ayaa hubaal ka dhigaysa in summadaada iyo astaantaadu laba jibbaaran tahay.
Calaamadaha Macaamilka ee daabacan
Duplex calammo cajaa'ib daabacan ayaa hubinaysa inaad ku raaxaysato 100% saamaynta daabacaadda qalinka. In kasta oo la sameeyo daabacaadda labada dabaq, dhar tayo sare leh iyo khaanadaha wax lagu daabaco ayaa la qaatay si loo hubiyo midabka muuqda oo firfircoon.
Sida nooca yar ee Calankeena Muuqaalka, calanka soo bandhigida miiska ayaa ah xulasho wanaagsan adiga haddii aad rabto inaad qurxiso bartaada xisaab la'aan munaasabad rasmi ah ama aan rasmi ahayn oo leh culeyskeeda fudud, qaab yar iyo muuqaal ah. Sawirada waxaa lagu heli karaa daabacado hal dhinac ah ama laba dhinac leh. Qalabka ayaa si isdaba joog ah loo isticmaali karaa.
Ku reeb aragti qoto dheer dhagaystayaasha oo wata calamada podium. Waxaa laga sameeyay satin caag soo jiidasho leh oo waara hadana laga heli karo cabirro badan, ka sokow, waa kuwo la qaadi karo oo si fudud loo isticmaali karo. Waxay sidoo kale cajiib u yihiin adeegsiga joogtada ah sida muxaadarooyinka muxaadarooyinka ee kaniisadaha iyo jawiga waxbarasho.
Calanka Golf-ka waxaa loo isticmaalaa koorsooyinka golf adduunka oo idil. Calanka Golf-ka ayaa door muhiim ah ka ciyaara caawinta ciyaaryahanka si uu u helo godka. Waxaa lagu arki karaa midabbo dhalaalaya oo ku saabsan koorsooyinka golf-ka.
Haddii aad ka fikirayso inaad farriintaada ugu gudbiso si muuqata beertaada, cawska ama meelaha kale ee bannaanka ah, markaa waa inaad u baahato calanka beerta. Waad habeyn kartaa dhinac kasta oo calankaaga ah, laga soo bilaabo qaabka, midabka, qaabka, astaanta illaa maaddada ama xitaa dhameystirka. Calanka beerta ee la qaabeeyey oo astaantaadu ku dhegan tahay macnaheedu waa wax ka badan qurxin uun, laakiin waxay u egtahay astaan, ama calaamado u gudbinaya farriimahaaga kuwa socda.
Calanka baabuurka waa hab moodo ah oo lagu muujiyo astaamahaaga iyo sumadahaaga. Macno malahan inaad gaariga wadato ama aad istaagto meel gawaarida la dhigto, oo calanka gaariga lagu xardho lagu dhejiyo gaarigaaga, waxaad isla markiiba fahmi kartaa xiisaha dadka iyo u fiirsashadooda. Sidaa darteed, markasta oo aad yeelato bandhig baabuur ama olole dhiirrigelin ah, shaki kuma jiro in calanka gaariga ay yihiin doorashada ugu fiican.
Calaamadaha boorsada ayaa ah aalad ku habboon kor u qaadista ganacsiga. Waxay ku habboon tahay dhiirrigelinta dhacdooyinka iyo ololeyaasha, qolkaaga carwooyinka lagu soo bandhigo ama lagu wada hayo kooxdaada dalxiiska
Calanka la daabacay waxaa lagu heli karaa laba nooc, afar qaab - Concave, Teardrop, Rektangle iyo U-shaped.
Helitaanka calammo si gaar ah loo sameeyay oo loogu talagalay isticmaalkaaga gaarka ah, ganacsigaaga, abaabulkaaga ama munaasabaddaada gaarka ah weligeed ma fududaan, mana ka qancin badan. CFM waxay toosineysaa howsha waxayna soo gudbineysaa shaqo tayo leh, oo lagu sameeyay qeexitaannadaada, noocyo badan oo calan ah: calanka caadada u ah qalinka, xayeysiinta calanka banaanka, calamado qaas ah, calamado gaar ah, calamado burgee ah, iyo xitaa calan gaar ah oo waaweyn.
Waxaa lagu daabacay muuqaal cad oo firfircoon, banner qaas ah ayaa ah habka ugu fiican ee lagu kasban karo dareenka macaamiisha mustaqbalka. Calan kasta oo caado ah ayaa loo samayn karaa iyadoo loo eegayo garaafyadaada iyo xaaladahaaga. Calankeenna caadada ahi waa hubaal xulasho si loo dallacaaddaadu uga dhigto mid heer sare ah!